Thai-Myanmar link lays road to prosperity over dark history - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Dec 31 2017 01:29 AM
Posted 31 December 2017 - 01:29 AM
Three-quarters ofacentury after the Imperial Japanese Army began its infamous "Death Railway" between Thailand and Burma -- now Myanmar -- the two countries are at work onanew transport link withamuch brighter mission: Giving Southeast Asia's hottest economies better access than ever to the world's fastest-emerging markets.
Since launching the ASEAN Economic Community at the end of 2015, the Association of Southeast Asian Nations has produced any number of cross-border transportation plans designed to enhance economic integration in the regional bloc.
ဂျပန်စစ်တပ်က အရမ်းကိုနာမည်ကြီးတဲ့သေမင်းတမန်ရထားလမ်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၇၅နှစ်လောက်အကြာမှာတော့ မြန်မာနှင့်ထိုင်းက ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါပြီ။ အရှေ့တောင်အာရှအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့ အချက်အချာကျလာနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၅ အာဆီယံစီးပွားရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကတည်းက ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာဖို့ကို ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ.။
Also tagged with one or more of these keywords: transportation, asean
Started by BurmeseNews , 28 Aug 2017 ASEAN, Active